नयाँ भेरियन्टले सुनामी संक्रमितको ल्याउँदैछ – डब्लूएचओ « गोर्खाली खबर डटकम
२०७८ पुष १८ गते आइतवार प्रकाशित
एजेन्सी – कोभिडको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन र डेल्टा भेरियन्टका कारण संक्रमितको सुनामी ल्याउने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले चेतावनी दिएको छ । युरोप र अमेरिकामा कोभिड संक्रमितहरुको संख्या आश्चर्यजनक ढंगले बढिरहेका बेला डब्लूएचओका प्रमुख डा. टेड्रोस एड्हानोम गेहब्रेयससले सो चेतावनी दिएका हुन् ।
‘स्वास्थ्य प्रणालीहरू काम गर्न नसक्ने अवस्था पुगेका छन भने स्वास्थ्यकर्मीमा चाप थपेको छ । कोभिडका नयाँ संक्रमणल संक्रमितको सुनामी ल्याउनेछ,’ डा. गेहब्रेयससले भने ।
डब्लूएचओका अनुसार विश्वभर दैनिक नौ लाखभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् ।संक्रमण फैलिएपछि विभिन्न देशहरुले बुस्टर डोज दिन सुरु गरेका छन् । युरोपका विभिन्न देशहरुमा भने लकडाउन र नयाँ प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिएका छन् ।
फ्रान्स र बेलायतमा अप्रत्यासित रुपमा दैनिक संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत केही राज्यमा रात्रीकालीन कफ्र्यू घोषणा गरिएका छन् ।
नेपाली सन्नी लियोनी भनेर चिनिएकी अदितीका हट एण्ड बोल्ड तस्बिर
नोभेम्बर २६ सन् २००८ मा भएको मुम्बई आक्रमणको सम्झना अपराधीहरू अझै खुल्ला समाजमा छन्: एउटा संस्मरण
‘बेसार पानीको भर न’परेर अ’लि चाँडो अ’स्पताल ल्याएको भए बुवा बाँ’च्नुहुन्थ्यो कि!’